सुत्ने तरिका र स्वस्थ जीवन::DainikPatra
मङ्लबार, साउन ७, २०७६ | Tuesday 23rd July 2019
सुत्ने तरिका र स्वस्थ जीवन
बुधबार, मंसिर ८, २०७३
ध्रव शरण ढुगांना
मानव जीवनमा जति महत्व कर्मको छ, त्यति नै विश्राम र शयनको पनि रहेको छ । संसारका सम्पूर्ण मनुष्यको जीवनको लगभग एक तिहाइ भाग बिस्तारामा बित्ने गर्दछ । हाम्रो दिनचर्याको महत्वपूर्ण अंग हो शयन ।
शयन अर्थात् सुत्नु गहिरो निद लिनु । मनुष्य मात्र होइन, पशु, पंक्षी, बोट विरुवा सबै शयन गर्दछन । सुत्नुको पनि एउटा विज्ञान छ । दिनभरी काम गर्दा गर्दै हामी थाकेका हुन्छौं र हाम्रो शरीरको उर्जा कम हुन्छ । यस्तो बेला हाम्रो शरीरले आराम मागेको हुन्छ । हामी जब सुतेर उठ्छौं तब आफूलाई फुर्तिलो तेजिलो महसुस गर्छाँै ।
शयनले नै दिनभरको थकानलाइ मेटाएर तनावदेखि मुक्ति दिलाउँछ । निदाएको बेलामा हाम्रो शरीरमा पुनः शक्ति संचित हुन्छ । यो कुरा स्पष्ट हो कि निद्राले हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यसँग गहिरो सम्बन्ध राखेको हुन्छ । सोही कारण हाम्रा ऋषिमुनीहरुले शयनको विषयमा कतिखेर कसरी सुत्दा राम्रो आनन्दका साथ निद्रा लिन सकिन्छ यस विषयमा बताएका छन् । सन्ध्याकालको समयमा सुत्नु हुँदैन । सुत्नेबेलामा गोडा दक्षिणतर्फ गर्नु हँुदैन । रात्री भोजन पच्छात् तत्काल शयन गर्नु हँुंदैन । उक्त नियम शयन सम्बन्धी निर्देशन शास्त्रले दिएको छ । सिरानीले पनि मनुष्यको आयुसँग सम्बन्ध राख्ने गर्दछ । उत्तर सिरानी गर्नाले आयुको क्षय हुन्छ । स्कुल जाने वा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पूर्व तर्फ सिरानी गरेर सुताउनाले सकारात्मक उर्जा, स्मरण शक्तिको वृद्धि र शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त हुने गर्दछ । प्रौढ व्यक्ति वा व्यवसायी वर्ग दिनभरीको चिन्तादेखि मुक्त रहन दक्षिण सिरानी गरेर सुत्दा राम्रो हुन्छ । यात्राकालमा पश्चिम सिरानी गरेर सुत्नु राम्रो हुन्छ । अनिद्रा, तनाव आदि रोगले पीडित वृद्ध व्यक्तिहरुका लागि सदैव दक्षिण सिरानी उत्तम मानिन्छ ।
सुत्नु भन्दा पहिले मधुर संगीत भजन सुन्नु, सद्साहित्य पढ्नाले राम्रोसँग निदाउन सक्दछ । कम्प्युटर मोबाइल तथा टेलिभिजनबाट निस्किने किरणहरुले निद्रामा असर पु¥याउने हुँदा शयन पूर्व एक घण्टा पहिले यी उपकरणहरु बन्द गर्दा राम्रो हुन्छ । राती सुत्दा छिटो निद्रा नलाग्ने समस्या भएका मानिसहरुले मोबाइल टेलिभिजन जस्ता साधनहरु सुत्ने कक्षमा राख्नु उचित मानिँदैन ।
छिटो सुत्नु र छिटो उठ्नु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिन्छ । पूर्व वा दक्षिण दिशा सिरानी गरेर सुत्नु विज्ञान सम्वत मानिन्छ । यस प्रक्रियाले अनेकौं बिमारीदेखि टाढा राख्दछ । सौर्य जगत धु्रवसँग आधारित छ । हाम्रो मानव शरीर पृथ्वीको समस्त चुम्बकीय तरङ्गबाट प्रभावित हुन्छ । स्वयं मानव शरीरले पनि सूक्ष्म चुम्बकीय तरङ्गहरुलाई विकिरण गर्ने गर्दछ । यसरी पृथ्वी र शरीरको चुम्बकीय धु्रवहरुबीच विकषर्ण हुन नदिने गरी सुत्ने तरिका नै दक्षिण सिरानी गर्नु हो किनभने चुम्बकीय तरङ्हरु दक्षिणबाट उत्तरतिर प्रवाहित हुने गर्दछन् । मनुष्य उत्तर सिरानी गरेर सुत्यो भने मनुष्यको चुम्बकीय तरङ्ग र पृथ्वीको चुम्बकीय तरङ्ग बीचको सम्बन्ध टुट्न जाने हुन्छ ।
सोही कारण उत्तर सिरानी गर्दा हृदयरोग लगायतका अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यस विपरीत दक्षिण सिरानी गरेर सुत्दा शिरबाट भएर गुरुत्वाकर्षण दक्षिणबाट उत्तरतिर प्रगतिशील विद्युत प्रवाह हाम्रो शिरबाट प्रवेश गरेर गोडातर्फबाट निस्केर जान्छ । यो प्रक्रियाले गर्दा भोजन सजिलै पच्ने र बिहान उठ्दा मस्तिष्क विशुद्ध भएर विद्युत् परमाणुहरुबाट परिपूर्ण तथा स्वस्थ रहन्छ । सोही कारण दक्षिण सिरानी गर्नु प्रकृति सम्मत पनि हो ।
धार्मिक ग्रन्धहरुमा दक्षिण दिशाका अधिष्ठाता यमराजलाई मानिन्छ । यदि दक्षिण गोडा गरेर सुत्यो भने यमलोक जाने तैयारी हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । यसको विपरीत उत्तर दिशाको मालिक कुवेरलाई मानिन्छ र कुवेर धनका देवता हुन् । उत्तरतिर गोडा गर्नाले कुवेरको दृष्टि व्यक्ति माथि पर्ने र धनधान्यले सम्पन्न हुने विश्वास रहेको छ ।
लागू पदार्थ, सिरिन्ज र एचआइभी एड्स
दैनिक पत्र संवाददाता /बिहिबार, असार १९, २०७६
महिला मापसे चालकको बढोत्तरी
दैनिक पत्र संवाददाता /मङ्लबार, असार १०, २०७६
महिलामा बढ्दो धूम्रपान र उत्पन्न जटिलताहरु
दैनिक पत्र संवाददाता /सोमवार, बैशाख १६, २०७६
दैनिक पत्र संवाददाता /आइतवार, बैशाख १५, २०७६
प्रदेश ५ का तीन जिल्ला औलोको उच्च जोखिममा
दैनिक पत्र संवाददाता /शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६
जनसंघर्ष दैनिकको नागरिक सल्लाहकारमा गोविन्द खनाल
रुपन्देही । राष्ट्रिय दैनिक जनसंघर्षले नागरिक समाजका मुद्दाहरुलाई उजागर गरी सामाजिक न्यायको पक्षमा बहस...
गन्तव्य समाजवाद, बाटो फरक
नेपालमा अहिले समाजवादको बहुतै चर्चा, परिचर्चा हुन थालेको छ । सबै राजनीतिक दलहरु र...
बुटवल १ मा १६ घर अन्यायपूर्ण रुपमा विस्थापित भएपछि त्यसो विरुद्ध ठूलो जनमत पीडितको...
बढदो तनावसँगै टुटदो सम्बन्ध
आर.आर हरिकृष्ण जोशी बैंकर अहिलेको आधुनिक परिस्थितिमा तनावै नहुने भन्ने कुरा हँुदैहँुदैन । तनाव यस्तो...
साउनमा व्रत, हरियो चुरा र मेहन्दी किन ?
हरिया चुरा मेरा हातभरि खुसी, उमंग अनि रमाइलो देशैभरि । वर्षा, प्रेम र झरीको सँगम साउन...
“स्वर्गद्वारी ! धरतीको स्वर्ग ।”
नेपाल हिमाल, पहाड, तराईको विकट भू–भाग भएको एक पवित्र भूमि हो , प्राचीन कालदेखि...
संविधानमा बालअधिकार ः व्यवहारमा बालश्रम
इन्दिरा पाण्डे सामान्यतया बालबालिका भन्नाले साना उमेरका केटाकेटी भन्ने बुझिन्छ । बालबालिकाको परिभाषालाई जो...
मुद्दा केन्द्रित संवाद थाल
अहिले सरकारले वार्ताको लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम गर्न थालेको छ । यो सुखद...
साउन महिना र हरियो चुरा बीच सम्बन्ध
माया कडेरिया हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार साउन महिनालाई शुद्धताको महिनाको रुपमा लिइन्छ किनभने यसै साउन महिनामा...
राष्ट्रिय दैनिक जनसंघर्षको सम्पादकमा खनाल र कार्यकारी सम्पादकमा अधिकारी
बुटवल । राष्ट्रिय दैनिक जनसंघर्षको सम्पादकमा पम्फा खनाल चापागार्इं र कार्यकारी सम्पादकको जिम्मेवारी अग्रज...
रोजगारीमा शास्त्रीय र आधुनिक दृष्टिकोणः एक विवेचना
युवकहरुलाई प्रौढहरुले प्रायः सोध्ने गर्छन्– के गरेका छौ ? यसको सोझो अर्थ हो धन...
मेलम्ची प्रमुखको राष्ट्रिय अपराध
गत साल नेपाल सरकारले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसित सल्लाह गरी उपत्याकामा २०७५ साल माघ...
‘उल्कापात’ आमन्त्रणारम्भ !
यति शक्तिशाली र ऐतिहासिक सरकारले जहाँ टेक्यो उही पहिरो जान थाल्यो, के हुन लागेको...
उद्धारमा प्रशंसनीय प्रयास
यो पटक मनसुन धेरै ढिला आयो तर शुरुमै अतिवर्षाको रुपमा आयो । यसले धनजनको...
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था ः समस्या र समाधानका उपायहरु
नुरजंग के.सी पृष्ठभूमिः बेलायतको औद्योगिक नगरी मेनचेस्टरका व्यापारीहरुको सामुहिक प्रयत्नबाट सन १८१६ मा पहिलो औद्योगिक क्षेत्रको...